Fifidianana sekretera jeneralin'ny UNWTO: Fanontaniana dimy sisa ary maro ho an'ny Birao mpanatanteraka
Home » Travel Associations News » Fifidianana sekretera jeneralin'ny UNWTO: Fanontaniana dimy sisa ary maro ho an'ny Birao mpanatanteraka
Enga anie 10, 2017
Roa andro sisa ny fifidianana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO vaovao ary efa manatrika ny fivorian'ny Birao mpanatanteraka ao amin'ny Hotel Melia Castilla any Madrid ny mpilatsaka hofidina. Nanasa ny mpamaky ny eTN hanome ny heviny sy ny heviny momba izay tokony hitarika ny indostrian'ny fizahantany manerantany. Profesora Geoffrey Lipman, mpiara-manorina SUNx, ary ny Filoham-pirenena Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP) Namaly.
Ka nisy 5 - Fanontaniana maro noho ny valiny ho an'ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO rehefa nifidy tamin'ny sekretera jeneraly vaovao ny zoma tany Madrid.
(Hevitra navoakan'ny Profesora Geoffrey Lipman)
Alain St. Ange nanao fampielezan-kevitra mahery vaika ho an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO. Tsy niankina tamin'ny fahaizany sy ny fahitany izany fa ny zava-misy, kandidà iray hafa avy any Afrika, Walter Mzembi dia manana ny fanohanan'ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina - ary tafiditra amin'izany ny firenena Seychelles Andriamatoa St. Ange.
Tamin'ny farany, io no anton-javatra mamaritra, ary rehefa nidina tamin'ny tariby ilay hazakazaka dia tsy mahagaga raha nivoaka avokoa ny fijanonana rehetra. Mampalahelo fa ho very ny fahitan'i St. Ange momba ny olana toy ny toetrandro, ny fiarovana na ny filan'ny nosy kely, ary koa ny mahavelom-bolo azy.
Saingy tsy tokony hanao ny tsy mety ny fahitana Andriamatoa Mzembi tsotra toy ny lalao politika. Mbola tanora izy nefa za-draharaha amin'ny vata fandrafetana sosialy sy politika. Nahavita zavatra betsaka izy mba hamelomana indray ny fanahy, ny fahitana ary ny fahombiazan'ny fizahan-tany Zimbabwe: ary koa ny fampiakarana ny lazany sy ny fifandraisan'ny firenena afrikanina tamin'ny alàlan'ny naha-filoha efa ela azy ny UNWTO Commission for Africa. Ny drafitra nataony ho an'ny UNWTO dia voadinika tsara, feno fahasahiana, fahitana, ary miaraka amin'izay dia mifototra amin'ny zava-misy iorenan'ny rafitra.
Izany no antony anolorany kandidà tena manintona. Ary tsy misy olona afaka miahiahy fa i Afrika miaraka amin'ireo mponina marobe mivoatra sy ireo fanamby amin'ny fampandrosoana dia hahazo tanjaka lehibe.
Miatrika mpanohitra henjana izy
Marcio Favilla dia mpitondra fizahan-tany be zotom-po, nanompo ny fireneny ho minisitry ny fizahantany lefitra ary avy eo talen'ny mpanatanteraka ao amin'ny UNWTO. Lehilahy tsara izy izay mahatakatra ny fotoana mety sy ny fanamby atrehin'ny fikambanana amin'ny fotoana tsy azo antoka. Insider izy fa manana traikefa lehibe any ivelany. Hita taratra amin'izany ny fandaharan'asany. Tahaka ireo sekretera jeneraly roa teo aloha dia teo amin'ny fitarihan'ny fikambanana izy nandritra ny taona maro. Milamina ny tetikasany ary tanteraka ny fanolorantenany. Ramatoa tanana azo antoka izy.
The Dho / Vogeler Ny tapakila dia zava-baovao ho an'ny fikambanana - izay niarahan'ny olona roa nanampy ny tanjaka sy ny fanambin'izy ireo amin'ny maha kandidà azy. Anomaly io. Raha toa ka Carlos Vogeler tsy azony fotsiny ny fanohanana tena ilaina avy amin'ny governemantany mba hirotsahany hofidiana, ary izy dia mitantara ny faritra toa an'i Marcio Favilla. Ary ny mpilatsaka hofidina Ambasadaoro Young Shim Dho tsy nanana ny fanohanana ara-politika iraisam-pirenena nilaina hanaovana fampielezan-kevitra matanjaka. Noho izany ny hevitra 2 ho iray. Ny programa aroson'izy ireo dia antenaina hitahiry ireo singa tsara ao amin'ny fitondrana misy fifantohana amin'ny ho avy - voalamina tsara, voavolavola ary aseho arak'asa.
Misy ihany anefa ny olana tsara sy ratsy amin'ny fiheverana ny tapakila fa tsy olona iray - ara-moraly sy ara-dalàna, ny taona, ny traikefa, ny mifanentana ary ny fifandanjan'ireo kandidà. Avy eo misy ny olana saro-takarina amin'ny toeran'ny programa flagship ST-EP - miaraka amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Koreana vaovao mifehy azy io.
Saingy mazava ho azy, eto aho dia tsy maintsy manambara fahalianana, satria nanana ny ST-EP, angamba talohan'ny fotoanany, ho toy ny fiara fitaterana MDG azo refesina, araka ny fanahin'ny SDG ankehitriny ... ..
Ary farany, ao ireo kandidà tsy fantatra.
Ambasadaoro Zurab Pololikashvili dia nanao fampielezan-kevitra ho an'ny mpitarika politika matanjaka amin'ny alalàn'ny firaisankina eropeana sy ny firotsahana an-tsehatra ataon'ny Lehibem-panjakana hampandroso ny firotsahany. Ny fandaharan'asany momba ny fanavaozana sy ny fitoniana dia eo an-tampon'ny karazana fanovana antenaina sy ilain'ny fikambanana. Izy no kendreny ny zava-misy marina anatiny sy ivelany toy ireo mpifaninana hafa. Ny fifantohany "glocal" dia fanekena lehibe ny fitomboan'ny fitaoman'ny fiarahamonina amin'ny ho avin'ny fizahantany ..
Ambasadaoro Jaime Alberto Cabal ny masoivohon'i Kolombia any Aotrisy, izay manondro ny filohany sy ny fireneny ho toy ny hery manosika ny firotsahany hofidina ary Amerika Latina no fototra .. Mifanohitra am-po no nitondrany ny hevitry ny mpikambana ao amin'ny UNWTO ao amin'ny Firenena Mikambana iray manontolo - hatramin'ny 150 ka hatramin'ny 200 eo ho eo ary indrindra ilay ”Vondrom-paritra Anglo-Saxon. Manome voninahitra ihany koa izy amin'ny fampitomboana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny tombontsoan'ny ONG amin'ny alàlan'ny fanitarana sy fanavaozana ireo mpiara-miasa. Tsindrio ny bokotra indostrialy mahitsy momba ny filaminana sy ny faharetana, ary mbola ho hita eo ihany ny halalin'ny fahitana azy.
Ankoatry ny fanontaniana napetraka tamin'ny levera izay notarihin'ireo fampielezan-kevitra, ny tena fanontaniana dia ny olona iray manana fahalalana voafetra momba ny sakany sy ny haben'ny hetsika UNWTO, ary koa ny fifandraisana, tanjaka ary fahalemena manerantany. tena mitondra ny fanovana naroso tamin'ny fotoana tsy azo antoka.
Ary mazava ho azy, ho ahy, misy ny fanontaniana ifotony - izay iray amin'ireo mpirotsaka hofidina rehetra, no tena manaiky fa raha toa ny fiovan'ny toetrandro dia ahoana no fomba anaovantsika ireo fanovana lalina hamaly an'io zava-misy marina io. Satria hoy i Naomi Klein "Manova ny zava-drehetra"
Fanontaniana maro be. Soa ihany fa ho fantatsika ny valiny amin'ny faran'ny herinandro.
Filoha Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP)
Fitazonana ny ankizy tsy ho voaro: tantara mahomby amin'ny fitarihana sy fizahantany maharitra
UNWTO dia miantso ny filohan'i Costa Rica ho masoivoho manokana amin'ny taom-pilalaovana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana maharitra
Dokotera karana: ny firakofana tenan'ny tain'omby dia TSY hamonjy anao amin'ny COVID-19